Taariikhda My Butros » 3 Talooyin Si Dating lagu jiro mudada Exam
3 Talooyin Si Dating lagu jiro mudada Exam
Last updated: Nov. 24 2020 | 2 min akhri
Waa markii in ee sannadkan mar kale. Muddo Exam ayaa soo dusay ilaa aad on iyo waxa uu noqday baanaha ah ee jiritaanka. Tiro dhan-nighters, maalmood oo ah walaaca iyo saacadaha Cramming waa waxa aad nolosha sida arday ka kooban yahay. Waxaan hore u socday agagaarka dhismaha iyo dareemayay inaan ahayd in apocalypse Zombie ah- taasi waxa weeye waxa la'aan ah oo hurdo ah iyo badinta kafeega iyo nacnac in ardayga celcelis falaa.
Natiijada kale ee waqtiga imtixaanka waa inaynu dhammaan isku buuqo goorey oo ka saari on dadka noogu dhow. Tani ma aha war wanaagsan u ah nolosha shukaansi. Waxaa dhici karta inaad dareento sida aad lahayn nolosha bulshada iyo in aad ciyaarta ku shubeyso hoos ugu socdaa. Haddii aadan u ogaaday weli, aad tahay oo ku saabsan in.
Nasiib wanaag, aadan u baahnayn in Nabiyow Raadkooda. Kuwani 3 talooyin kaa caawin kara inaad ACE imtixaanada aad iyadoo la sii calaamad sare ee noloshaada shukaansi.
Tixgeli dib u celineyso aad soo jiidashada.
Muddo Exam waa waqti muhiim ah in shaqo waxbarasho, sidaas waxaa laga yaabaa in fikrad fiicantahey in la qaboojiyo on taariikhaha. Tan iyo markii aad rabto in aad si fiican u samayn imtixaannada aad, aadan rabin in ay halis ay ka maqan waqti waxbarasho oo qiimo leh u sabab ah dhowr ah oo timir ah. Marka aad barashada qoto-dheer qaaciidooyinka sayniska iyo sida uu ganacsiga, barashada sida ku meel gaar ah iska diido inuu aad jiidashada faa'iido aad adiga iyo lammaanahaaga u noqon doonaa.
Fundka waa sida ay muhiim u caffeine.
Red Bull, jalaato, chips iyo kafeega u muuqdaan in ay horumariyaan heer sare ah muhiimadda inta lagu jiro waqtiga imtixaanka. Si kastaba ha ahaatee, aanay cadayn doono inuu yahay mid waxtar leh marka ay timaado shukaansi, si Miisaankiisu kuwaasi waa saaxiibkaa cusub fiican. Waxa aan aad wax wanaagsan qaban doonaa haddii aad wax ka barato, maalintii oo dhan, habeenkii oo dhan, ma arki qoraxda oo ha ka yeelanina biririf kasta. Joogtaynta dheellitir u dhaxeeya waxbarashada iyo biririfta muhiim ah oo la cadeeyay in ay xoojiyaan awoodaha waxbarashada iyo waxqabadka imtixaanka.
Rakibidda in waqti ay ku istiriixo, stress, iyo bask in qoraxda qaar ka mid ah waa furaha. Biririf waxbarasho waxay noqdaan fursado haboon inuu waqti la qaato kuwa aad jeceshahay. Tixgali inuu habeenkii filim walba si ay inta badan ama wada daawadaan TV show ah.
Haddii kale, ka baxsan helitaanka iyo firfircoonaan waa hawl lagala kulmo wanaagsan, iyo sidoo kale waxtar ay u leedahay caafimaadka guud- Idinkoo arkaya, sida aad cunto ka kooban tahay sonkorta iyo caffeine. Aado socod gaaban u dhexeeya Cramming fadhiyada iyo canaan ku saabsan stress nolosha tacliinta sare. Hawo daray hayn doonaan maskaxda cusub.
Haddii ay nolosha gaaban kulmaya badan Skype, sheekaynta telefoonka oo keliya in la maqlo codkooda, dabayaaqadii fadhiyada laata oo habeenkii ama hurdo ayaaba, hubi in aad loo ilaaliyo miisaanka u dhexeeya shaqada iyo play.
Tani waxay ka mid quruxsan is-lunsi. Ha illoobin in ay u dabaal mar imtixaanka waa la adkaanay! Qorshee wax madadaalo in labadiinaba aad samayn karto si aad dabaal ruxid imtixaanada oo dhan iyo dib loo daari lahaa aad xiriir. Haddii aad tahay oorso yar oo xeeb ku nool ah danayn iyo qorsheeyo wax ka hor markaas ay idin siin doono wax rajo ah u muuqan.
Kuwani 3 talooyin kaa caawin doona inaad sii dabka ee nolosha jacaylka inta lagu jiro mudada imtixaanka ka duulaan. By kuwaas tidbits aqoonta waxbarasho oo ay la socdaan koorsooyinka aad xad-dhaaf ah, aad u yeelan doontaa in ay guuleystaan ​​niyad imtixaanada aad iyo sidoo kale in aad noloshaada shukaansi.
Can Xayawaanka Flags Dareenka Red marka ay timaado Mr. Right?
Yaa u bixinaayo on Date a First – Talo Wixii Men
5 Ways Creative in dhahdaa waan ku jeclahay